Dhiraivhu dzinokutendera iwe kusevha iwe paunenge uchityaira | IPhone nhau
Drivies ichakubatsira iwe kuve mutyairi ari nani uye chengetedza mari neinishuwarenzi yemotokari yako
Iwe unoda kuziva kana iwe uri mutyairi akanaka? Uye zvakadii nezvekuchengetedza mari iwe uchinge waziva? Pfungwa iyi yakazvarwa Drivies, chishandiso icho ongorora maitiro edu ekutyaira Uye, kana rwendo rwapera, tinogona kuona kana takurumidza kumhanya, kana takamhanyisa zvakanyanya kana kana takabhuroka nekukasira, ndiko kuti, kana tave tichigona pakufambisa kwedu parwendo rwedu rwekupedzisira nemota.
Asi Drivies haingopa chete ruzivo, asi kana tiri vatyairi vakanaka, inotipa mubairo nekutipa pfungwa dzatinogona kuchinjana nemari chaiyo patinotora inishuwarenzi kuburikidza neDrivies. Iyo app zvakare iri inishuwarenzi muenzanisi Uye, sekuziva kwaachaita nzira yedu yekutyaira nekuti anogara achienda nesu, anogara achipa sarudzo yakanakira isu.
1 Drivies, ponesa paunenge uchityaira
2 Mashandiro anoita Drivies
Drivies, ponesa paunenge uchityaira
Chinhu chakanaka nezve Dhiraivhi ndechekuti isu tinogona kuti pane zvina zvinoshandiswa mune imwechete:
Tine chikamu icho inotizivisa nezve matyairo atinoita uye kuti tingaite nani. Kana akatiudza kuti tiri kubroka zvakanyanya, kuti tiri kumhanya zvakanyanya kana kuti tiri kumhanyisa uye isu tinoda kuwana mamwe mapoinzi, isu tichafanirwa kushandura matyaire atinoita.
Chikamu icho enzanisa inishuwarenzi Zvinotitadzisa kushandisa maawa tichitsvaga internet kana kutarisa kushambadza neimwe nzira. Sei uchitambisa nguva kana mumwe munhu achigona kutiitira basa?
Paunenge iwe wawana inishuwarenzi inokodzera isu, tinogona kuvashandira kubva kune imwecheteyo application, isu hatifanirwe kuenda kubazi, kufona kana kubata iko kubatira pamhepo.
Drivies zvakare ine chikamu chemagariro umo matinogona kuwedzera shamwari uye kukwikwidzana nadzo kuve mutyairi wepamusoro wevhiki. Ini handizive nezvako, asi ini handifarire kurasikirwa kunyangwe iwo marombo.
Sezvatakambotaura, Drivies akazvarwa kutiita vatyairi vari nani uye anotipa mukana wekuita mari, asi handicho chete chikonzero chekuvapo kwayo. Vanonyepedzerawo kunatsiridza kuchengetedza mumugwagwa, sezvo isu tichiita zvirinani kutyaira, tinenge takachengeteka tichava vese. Kune rimwe divi, anodawo kuti inishuwarenzi ive yakanaka uye, kana tikatyaira zvakanaka uye zvichiratidza, kuti hatifanirwe kubhadhara zvakafanana nemumwe munhu anotyaira zvakanyanya.
Mashandiro anoita Drivies
Iko kunyorera kunoshanda uchishandisa maseru atinogara tichitakura muhomwe medu: iyo sensors yeedu smartphone. Nenzira imwechete iyo iyo iPhone inogona kuverenga matanho edu, Drivies anoongorora ruzivo rwunotora kubva kune iyo smartphone pasina kukanganisa bhatiri remuchina. Uye chakanakisa pane zvese ndechekuti hapana chatinofanira kuita; iyo application ichaona patinenge tichifamba uye ichatanga kubata iyo data.
Iwe unofungei nezve zano? Zvakanaka, zvirokwazvo uchazviwana zvakatonaka kana iwe uchiziva kuti Drivies ndeye application yemahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Drivies ichakubatsira iwe kuve mutyairi ari nani uye chengetedza mari neinishuwarenzi yemotokari yako
Pakazara, iko kunotora kunotora dhata redu rekutyaira uye kunogona kushandiswa kuita kuti makambani azive maitiro edu ekutyaira (akanaka kana akaipa).
Iyo nyowani MacBook Pro inogona kusanganisa chigunwe cheminwe mune bhatani remagetsi